भोली लाग्दै यो वर्षकै पहिलो चन्द्र ग्रहण, कुन कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ? पढौ र जानकारी सेयर गरौ – Sapana Sanjal
भोली लाग्दै यो वर्षकै पहिलो चन्द्र ग्रहण, कुन कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ? पढौ र जानकारी सेयर गरौ
May 25, 2021 438
भोली लाग्दै यो वर्षकै पहिलो चन्द्र ग्रहण, कुन कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव पर्नेछ ? नयाँ वर्ष २०७८ सालको पहिलो चन्द्र ग्रहण जेठ १२ गते बुधबार लाग्दैछ । यस दिन वैशाख शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि पनि परेको छ। यो पटकको चन्द्र ग्रहण उपछाया चन्द्रग्रहण हुनेछ। त्यसैले यसको सूतककाल मान्य हुने छैन्।
यो चन्द्रग्रहण नेपालबाट भने देखिने छैन्। त्यसैले नेपालमा पनि सूतक नलाग्ने नेपाल पञ्चा,ङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यो चन्द्रग्रहण नेपाली समय अनुसार दिउँसो २ बजेर ३२ मिनेटबाट शुरु भएर वेलुकी ९ बजेर ३९ मिनेटमा सकिनेछ। यो नेपालबाट नदेखिने भएपनि व्यक्तिको जीवनमा भने प्रभाव पार्ने ज्योतिषीहरु बताउँछन्। ग्रहणको चाल व्यक्तिको जीवनमा निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ।
व्यक्तिमाथि राम्रो र नराम्रो गतिविधि ग्रहको चालका कारण हुने गर्छ। सबै राशिमाथि यस ग्रहणको प्रभाव अलग अलग हुने गर्छ। यो पटकको चन्द्र ग्रहणको प्रभावले केही राशिलाई धन लाभ हुनेवाला छ भने केही राशि सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। आउनुहोस् हेरौँ कुन राशिलाई पर्नेछ कस्तो असर ?
मेष राशिः मेष राशिका व्यक्तिमा चन्द्र ग्रहणको प्रभाव राम्रो पर्ने छ। जसका कारण धन लाभको निकै सम्भावना देखिन्छ। तर मानसिक तनाव भने झेल्नुपर्ला । आफ्नो र आमाको स्वास्थ्यको ध्यान राख्न आवश्यक छ । लामो समयदेखि रोकिएका प्रोजेक्ट पूरा हुनेछन्। आफ्ना प्रियजनसँग राम्रो सम्बन्ध रहला ।
वृष राशिः वृष राशिका व्यक्तिमा पनि चन्द्र ग्रहणको प्रभाव ठिकै देखिएको छ। धन प्राप्ति हुनुका साथसाथ खर्च पनि हुने देखिन्छ। त्यसले फजुल खर्चबाट बच्नुहोला । वैवाहिक जीवनमा खटपट् हुने देखिन्छ। वाणीमा नियन्त्रण राख्नुहोला ।
मिथुन राशिः यो पटकको चन्द्र ग्रहणको मध्यम प्रभाव मिथुन राशिका व्यक्तिमा पनि पर्नेछ। यस क्रममा वादविवादबाट बच्नुहोला । केही अप्रत्यासित घटनाको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। सावधानी अपनाउनुहोला ।
कर्कट राशिः यस राशिका व्यक्तिलाई व्यापार व्यवसायमा लाभ हुने देखिन्छ। दोस्रो व्यक्तिको कुराको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै विवेकको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। दुर्घटना हुने आशंका पनि छ। त्यसैले सावधानी अपनाउनु होला। मानसिक तनाव वा पेटको समस्या देखिनसक्छ। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला।
कन्या राशिः यस राशिका व्यक्ति आकर्षणका केन्द्र ब,न्न सक्नेछन्। नोकरीमा वृ,द्धि हुनेछ। मानसम्मान बढ्नेछ। भाग्य बलियो हुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्नेछ। हतारमा निर्णय लिनबाट भने बच्नुहोला। आफ्ना आसपासका व्यक्तिसँग धैर्य बनाइराख्नुहोला।
Prevगोरखाको आरुघाट क्षेत्रबाट सोमबार सालकको उद्धार
Nextपोल खुल्ने डरले प्रेमिकाका २ छोरालाइ……….
कालिमाटीको सडक पेटीमै ४३ बर्षिय एक पुरुष मृत फेला